‘दाउरालाई गल्फ स्टिक मानेर घुमाउँदा गल्फ खेल्ने मौका पाएँ’ – Everest Times News
‘दाउरालाई गल्फ स्टिक मानेर घुमाउँदा गल्फ खेल्ने मौका पाएँ’
२०७४ असार १७, शनिबार ०५:४५
प्रतिमा शेर्पा, गल्फर
सोलुखुम्बु नाम्चेकी प्रतिमा शेर्पा नम्बर वन नेपाली लेडी गल्फर हुन् । रोयल नेपाल गल्फ क्लबको सहयोगमा गल्फ यात्रा तय गरेकी उनले अहिलेसम्म ३२ टुर्नामेन्ट जितिसकेकी छन् । १८ वर्षीय प्रतिमा घरेलु गल्फ कोर्समा सर्वाधिक उपाधि जित्ने महिला गल्फर हुन् । त्यसैले तीन महिनाअघि उनलाई गल्फ क्लबले नेपालको नम्बर वन नेपाली लेडी गल्फको उपाधि प्रदान गर्‍यो।
१८ वर्षीया उनी जुलाई २ मा गल्फमा थप प्रशिक्षणका लागि अमेरिका आउँदैछिन् । दुई महिना अमेरिका रहने प्रतिमाले ३ टुर्नामेन्टमा पनि भाग लिनेछिन् । प्रतिमाले क्यालिफोर्नियाको भेन्टुरामा रहेको गल्फ एकेडेमी अफ ओलिभिया लिङ्स गल्फ कोर्समा प्रशिक्षण गर्नेछिन् ।
प्रतिमाले आगामी जुलाई १८ देखि २१ सम्म हुने ५०औं टिटलिस्ट म्याच प्ले च्याम्पियनसिप, फाउन्डर्स कप र टेलरमेड टुर च्याम्पियनसिपमा भाग लिनेछिन् । फाउन्डर्स कप जुलाई ३१ मा हुनेछ भने टेलरमेड टुर अगस्ट ५ र ६ मा हुनेछ । यसै सन्दर्भमा उनीसँग एभरेस्ट टाइम्सका लागि नेत्र तामाङले गरेको कुराकानीः
तपाईं नेपालकै ‘नम्बर वन लेडी गल्फर’ हुनुभयो, यहाँसम्मको यात्रा कसरी सुरु भएको थियो ?
म काठमाडौंको एयरपोर्टस्थित गल्फ कोर्सको मैदानमै हुर्कें । मेरो बुवाआमा यही मैदानभित्र काम गर्नुहुन्छ । उहाँहरुसँगै दौडदाँ खेल्दा मैले गल्फ खेलेको देखें । मलाई गल्फ खेल्न मन लाग्यो । घरमा भएको दाउरालाई गल्फ स्टिकका रुपमा उचाले र त्यही घुमाउन थालें । त्यहीबेला रोयल नेपाल गल्फ संघका अध्यक्ष टासी घलेज्युले देख्नुभएछ । र, मलाई उहाँले गल्फ खेल्न भोलिपल्टैबाट अवसर दिनुभयो । त्यहीबेलाबाट मैले गल्फ स्टिक समाएर दुरी हान्न पाएँ । सन् २०१० नोभेम्बरबाट होला मैले खेल्न पाएकी । त्यसपछि हामीजस्तै बालबालिकाका लागि निःशुल्क खेल कार्यक्रम पनि आएछ । यही कार्यक्रममा रहेर प्रशिक्षक सचिन भट्टराईसँग खेल्न पाएँ । उहाँको प्रशिक्षण, नेपाल गल्फ संघको सहयोग, टासी घले सरको अभिभावकत्व पाएर गल्फमा निरन्तरता दिन पाएँ । यही क्रममा मैले विभिन्न सिनियर÷जुनियर टुर्नामेन्टमा भाग लिने मौंका पाएँ । मैले राम्रो खेलेको भनेर उहाँहरुले प्रशंसा गर्नुभयो । हौसला बढ्दै आयो । नेपाल गल्फ संघले नै तीन महिना अघि मलाई यो उपाधि प्रदान ग¥यो ।
खेलसँगै पढाई पनि महत्वपूर्ण छ, खेल र पढाइबीच कतिको तालमेल हुन्छ ?
म एकदमै सामान्य परिवारमा जन्मेकी हुँ । बुवा नाम्चेबाट ट्रेकिङमा हिड्नुभएको रहेछ । पछि काठमाडौंमा यही गल्फ संघमा काम पाउनुभएछ । मेरो बुवाआमा मलाई खेलभन्दा बढी पढाईलाई नै ध्यान दिन भन्नुहुन्छ । खेलको साथमा मैले पढाईलाई छुटाइनँ । मैले तिलगंगामा रहेको बाबा बाटिका सरकारी स्कुलबाट एसएलसी पास गरें । अहिले सोह्राखुट्टेमा रहेको प्राइम कलेजबाट प्लस टु को अन्तिम परीक्षा सकाएर बसेकी छु । व्यवस्थापन विषय लिएर पढेकी छु । कहिलेकही पढाइका महत्वपूर्ण कक्षाहरु र परीक्षा हुदाँ महत्वपूर्ण गेम मिस गरेकी छु । तर, दुबैमा ठुला वाधाहरु परेको छैन । म पढाईलाई अझै पनि निरन्तरता दिन्छु ।
अमेरिकामा प्रशिक्षणका लागि जाँदैहुनुहुन्छ, यो प्रशिक्षण मौका कसरी पाउनुभयो ?
झन्डै एक वर्षअघिको कुरा, एकजना अमेरिकी पत्रकारसँग भेट्ने मौका मिलेको थियो । उहाँले अमेरिकामा निस्कने चर्चित पत्रिका गल्फ डाइजेस्टमा मेरो बारेमा लेख्नुभएछ । खेलप्रतिको लगावबारे त्यो समाचारले राम्रै चर्चा पायो । त्यसपछि नेपाल गल्फ संघको प्रयास र क्यालिफोर्नियाको भेन्टुरामा रहेको गल्फ एकेडेमी अफ ओलिभिया लिङ्सका कोचहरुको सहयोगले मैले यो मौका पाएकी छु ।
यो प्रशिक्षणबाट तपाईंले नयाँ उर्जा, नयाँ सीप पाउनुहुन्छ ?
पक्कैपनि, पहिलो कुरा त यहाँका प्रशिक्षकहरुकाअनुसार नेपालमा राम्रो खेल मैदान छैन । त्यसैले पनि विदेशमा स्तरीय खेल मैदानमा अभ्यास गर्नु मेरो लागि अति आवश्यक थियो । भाग्यवस, मैले त्यो मौका विश्वकै राम्रो गल्फ खेल हुने देशमा पाएँ । मेरो पहिलो यात्रा हो विदेशमा । त्यहाँ गेम कसरी खेलिन्छ, अझै त्यसबारे अझ धेरै सिक्न पाउनेछु । जसले यता फर्केपछि खेल्नमा सहयोग गर्नेछ र बाहिर हुने इन्टरनेसनल टुर्नामेन्टहरुमा पनि खेल्न म दक्ष हुनेछु भन्ने लागेको छ ।
अबका दिनहरुमा गल्फमा कसरी अघि बढ्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
म गल्फ मैदानमै हुर्किएकीले मैले गल्फ खेल बाहेक केही सोचेकी छैन । अबको एउटै लक्ष्य भनेको प्रो गल्फर बन्ने हो । यसका लागि लगाव, ट्रिक, प्रशिक्षण सबै चाहिन्छ । गल्फ मेनेजमेन्ट कोर्स गर्न पनि आवश्यक छ । यसको राम्रो कोर्स अमेरिकामा मात्र हुन्छ भनेर सुनेकी छु । खर्चिलो हुन्छ भन्ने कुराहरु पनि छ । सबैको साथ र सहयोग पाए भने पक्कै पनि नेपालको नाम राख्न नम्बर वन लेडी प्रो गल्फर बनेर अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरुमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछु ।
प्रतिमासँग कन्फिडेन्ट छ–सचिन भट्टराई, प्रशिक्षक
प्रतिमासँग कन्फिडेन्ट छ । खेलको लागि चाहिने सबैथोक भनेको नै यही कन्फिडेन्ट हो । उसँग १२ जनाले गल्फ खेल्न सुरु गरेका थिएँ । तर, प्रतिमा नम्बर वन भएकी छन् । अहिलेसम्म उनले एमेच्योर गेमहरु खेलेकी छन् । उनको खेल देखेर अमेरिकाको एकेडेमीले बोलाउने, टाइगर उड्सको चिठी पाउनु हाम्रो लागि पनि गर्वको कुरा हो । म आफै पनि अमेरिकामा गल्फ कोर्स गरी नेपालमा केही गरौं भनेर फर्केको हुँ । उ मेरो विद्यार्थी हो भनेर भन्न पाउँदा निकै खुसी लाग्छ । अहिले उनले २३० यार्डसम्मको खेल खेलिसकेकी छन् । अमेरिकामा प्रशिक्षण पाएपछि उनले प्रोफेसनल खेलहरु खेल्न सक्नेछिन् । सबैले हेर्ने भनेको भोलि के गर्छ भन्ने हो । पक्कै पनि प्रतिमाले देशको नाम राख्नेछ भन्नेमा म ढुक्क छु ।